Goorma ayey cunugyaashu cuni karaan waxaan qabaa | Bisadaha Noti
Ma daryeeshaa bisad agoon noqotay ama hooyadeed quudin kari wayday? Hadday sidaas tahay, waxaad xaqiiqdii isweydiineysaa goorta aad bilaabi karto inaad siiso wax badan ama ka yar cuntada adag, sax? Quudinta dhalada waa khibrad aad u qurux badan, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku abuurto xiriir aad u gaar ah dhogorta, laakiin sidoo kale waa mid aad u baahan. Waa inaad aad uga feejignaataa isaga, oo aad quudisaa 3-4-dii saacadood kasta iyadoo kuxiran toddobaadyada uu haysto (kuwa yar intay yihiin, inta badan wuxuu u baahan doonaa inuu caano cabbo).
Isagu waa mid la jeclaan karo oo aad iyo aad u nugul, laakiin waxaa imanaya waqti ay tahay inuu yara kaco oo ugu yaraan iskiis u madax bannaanaado si uu u daryeelo baahidiisa jir ahaaneed. Marka bal aan eegno goormay bisaduhu bilaabi karaan inay wax cunaan?.
1 Maxuu cunugga dhashay ee dhasha ahi cunaa?
2 Laga bilaabo naas-nuujinta ilaa quudinta adag ee kittens
2.1 Kahor naasnuujinta
2.2 Goynta naasnuujinta
3 Sida loo naas nuujiyo
3.1 Inbadan oo ku saabsan kitanka naas-nuujinta
4 Goormaad cuni kartaa quudinta?
5 Tilmaamaha quudinta ee kittens
Maxuu cunugga dhashay ee dhasha ahi cunaa?
Mukulaasha, laga bilaabo dhalashada illaa saddex toddobaad markay jirto, waa in la quudiyo oo keliya caanaha naaska. Haddii aysan tani noqon karin, ama maadaama hooyadeed aysan joogin ama xaaladdeeda caafimaad ay liidato, waa in la siiyaa mid ay ku iibiyaan rugaha caafimaadka xoolaha iyo dukaamada xayawaanka gaar ahaan kuwa loo yaqaan 'kittens'. Ha siinin caanaha lo'da, maadaama ay ku jirto laaktoos, oo ah sonkor inta badan keenta dhibaatooyinka caloosha.
Haddaynaan helin caano bisad, waxaan kuu diyaarin doonaa isku darkan:
250ml oo caano dhan aan lahayn laktoos.
Ukunta ukunta (aan cad lahayn)
Shaaha oo kareem culus
Haddii aynaan heli karin caano dhan laktoos la'aan, waxaan isku dari karnaa waxyaabaha soo socda:
150 ml oo caano dhan ah.
50 ml oo biyo ah
50 ml yogurt dabiici ah
Caloosha ukunta (aan cadaan lahayn)
Dhammaanteen si fiican ayaan u walaaqnaa si ay si fiican isugu qasan tahay, xoogaa waan kululeynaa si ay u kululaato (qiyaastii 37ºC) oo waxaan siinnaa eeyga.
Laga bilaabo naas-nuujinta ilaa quudinta adag ee kittens
Mukulaasha marka la naas-nuujiyo waa markay ka tagto caanaha hooyada una gudubto cunnooyinka adag waana arrin muhiim u ah kittens-ka maadaama ay qayb muhiim ah ka tahay horumarintooda. Badanaa hooyada kittens-ka ayaa mas'uul ka ah naas-nuujinta, laakiin marka hooyadu dhibaato ka haysato soo saarista caano ama markii qashinkii kittens laga tago hooyo la'aan, markaa waa lagama maarmaan in la dhexgalo si kuwa yaryar u yeeshaan horumar wanaagsan. Tilmaamaha soo socdaa waa kuwa ay tahay inaad maskaxda ku hayso si hawshu u noqoto mid sax ah.
Kahor intaadan bilaabin hawsha naas-nuujinta waxaa muhiim ah in kittens-ka ay heli karaan caanaha naaska ama dambarka oo leh unugyo muhiim u ah koritaankooda. Haddii bisadu soo saari karin caano ku filan bisad kasta waa inay heshaa caano, waxaa fiican in la helo waxyar inta aan la helin. Haddii hooyadu leedahay naaso waxaad raadin kartaa bisad nuujinaysa oo kale in aad quudin kartid kittens-ka xitaa haddii aysan iyagu kuu ahayn.
Haddii aysan jirin hooyo nuujinaysa kalkaaliye, markaa caanaha carruurta waa in loo isticmaalaa dhalo ama sirinjiro. Waxaa lagu quudi karaa saddex ama afar toddobaad dhalo (dalab) had iyo jeer dhalo biyo kulul leh waana inaad isku daydaa ka hor intaadan caanaha gacantaada ku shubin si aad u aragto inuusan gubin oo uu ku jiro heerkul raaxo leh, sidoo kale haddii aad isku daydo waxaa fiican inaad iska hubiso inaysan xumaan. Haddii aad isticmaaleyso caano booraha, ku keydi budada aan la isku darin qaboojiyaha. Waxay quudiyaan dalab maalin iyo habeen labadaba.
Way ka badan tahay ama ka yar tahay inta lagu jiro afarta toddobaad ee nolosha markii naasku ka dhammaaday. Waxay bilaabi doonaan inay isku dayaan inay cunaan cuntada. Markay bilaabaan inay wax qaniiyaan oo ay calaliyaan dhalada waa sababta oo ah waxay diyaar u yihiin inay bilaabaan cunista cunnooyinka adag, in kastoo bilowga waxaa fiican inaad ahaato semi solid.
Sida loo naas nuujiyo
Si aad u bilowdo naas nuujinta, isku qas cuntada bisadaha iyo caanobooraha si aad u ogaatid dhadhanka. Isku dar fartaada isku dar afkooda afkooda oo u oggolow inay ku nuugaan. Markii ay la qabsadaan dhadhanka, waxay eegi doonaan meelo kale oo ay ku quudiyaan.
Ka dib, ku sii baaquli oo sifiican u ilaali si aysan si dhakhso ah wax u cunin oo aysan madaxooda yar ku riixin baaquli, u oggolow inay iyagu naftooda u sameeyaan. Waxay udhaxeyn doontaa usbuuca shanaad iyo boqoshaada markii ay si tartiib tartiib ah ugu gudbi karaan cuntada qalalan. Quudinta waa in marka hore xoogaa biyo lagu qoyo asbuuca toddobaad iyo sideedaadna waa inay marhore cunaan cunto adag.
Inbadan oo ku saabsan kitanka naas-nuujinta
Markaad naaska ka nuujiso cunnooyinka adag, waxaa lagama maarmaan ah in cuntada ay qaadataa ay gaar u tahay kittens-ka. Cuntadan noocan ahi waxay leedahay dhammaan borotiinnada, fiitamiinnada iyo wax kasta oo lagama maarmaan u ah inay xoog iyo caafimaad yeeshaan.
Kittens-ka cusub ee naaska laga jaray waxay u baahan yihiin inay diirimaad yeeshaan, marka waa muhiim inaad bustayaal dhigato halka ay seexdaan waana ka sii muhiimsan tahay hadaan hooyo jirin. Kuleyliyaha kuleylka ama dhalooyinka biyaha kulul bustayaal ama shukumaanno ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan. Tani waxay siin doontaa kittenska diirimaad badan oo ay u baahan yihiin.
Recuerda que waa inaadan qasbin nidaamka naas-nuujinta in la cuno cunnooyinka adag. Waa hab tartiib tartiib ah waana lagama maarmaan in la ixtiraamo laxanka. Kaliya waxay u baahan yihiin dulqaad badan laakiin sidoo kale jacayl badan.
Goormaad cuni kartaa quudinta?
Mar hadday bisadu 3-4 toddobaad jirsato, wuxuu bilaabi doonaa inuu dhalo dhalada, gacmaha, iyo shay kasta oo wadada ku jira. Waxay noqon doontaa calaamadda aan sugeyno inaan bilowno inaan siino nooc kale oo cunto ah, maadaama ilkahiisa caanaha ay billaabi doonaan inay soo baxaan sidaas darteed, hadda waad ruugi kartaa cunnooyin aad u jilicsan, sida daasadaha yaryar (cuntada qoyan).
Maaddaama aad u badan tahay inaadan rabin inaad keligaa wax cunto, waxaan ku qaadaneynaa cuno yar farta, afka ayaanu fureynaa waana soo bandhigi doonaa. Kadibna, si adag ayaanu u xidhi doonnaa laakiin xoog badan la'aan (wax dhib ah oo loo geystaa ma jirto) illaa ay liqdo. Ka dib markaa, waxaan u keeni doonnaa saxanka cuntada oo dabiici ahaan, wuxuu u badan yahay inuu keligiis wax cuno. Haddii kale, waxaan u samayn karnaa nooc boorash ah oo cunno qoyan leh oo lagu qasay caano loogu talagalay carruurta yar yar, oo waxaan ku siin karnaa dhalo dhowr maalmood.
Isaga oo jira laba bilood, waxaad siin kartaa cunto loogu talagalay kittensLaakiin maadaama aysan wali yeelan doonin ilko aad u xoog badan, waa in lagu qasaa caano yar yar ama biyo.
Tilmaamaha quudinta ee kittens
Marka kan yar wuxuu leeyahay koritaan aad u wanaagsan iyo horumar wanaagsan, Waa in la siiyaa cunto tayo sare leh, oo aan lahayn badarka (galley, sareen, sarreen, bariis) ama wax soo saarMaaddaama jidhkaagu aanu u baahnayn maaddooyinkan oo, runtiina, waxay kuu keeni karaan dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan muddada gaaban iyo kuwa dhexe, sida xasaasiyadda ama infekshinka kaadi-mareenka Caafimaadka bisadaha waa arrin aad u culus. Xaaladiisa waxay in badan ku xirnaan doontaa nooca cuntada uu qaato, marka lagu daro daryeelka uu helo.
Annaga, sida daryeelayaashaada, Waa inaan si aad ah uga feejignaano isaga oo aan siino dhammaan dareenka uu u baahan yahay. Waxay nagu xirnaan doontaa innaga haddii yarku ku weynaado farxad iyo caafimaad, ama ... wax iska soo horjeed ah. Haddii aynaan daryeeli karin isaga, waxaa ugu wanaagsan inaan u helno guri cusub, haddii ay suurtagal tahay iyadoo la kaashanayo ilaaliye xayawaan ah, kaasoo mas'uul ka noqon doona sidii loo heli lahaa qoys mas'uul ka noqon kara kan ugu yar illaa dhammaadka maalmihiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cuntada » Goorma ayey nuujintu wax cuni karaan?
Dhammaan wixii ku saabsan dabeecadda dhuleed ee bisadaha